Ugu yaraan 8 qof oo lagu dilay dagaal u dhaxeeya Puntland iyo Galmudug oo ka dhacay Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandUgu yaraan 8 qof oo lagu dilay dagaal u dhaxeeya Puntland iyo Galmudug oo ka dhacay Gaalkacyo
Ugu yaraan 8 qof oo lagu dilay dagaal u dhaxeeya Puntland iyo Galmudug oo ka dhacay Gaalkacyo
October 7, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia, South-Central 0
Magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, bartamaha Soomaaliya. [Sawirka: Archive]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Ugu yaraan lix qof oo lagu dilay dagaal ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo u dhaxeeyay Puntland iyo Galmudug,sida ay sheegeen dadka deegaanka iyo saraakiisha caafimaad.
Tobonaan kale ayaa ku dhaawacmay dagaalka, sida ay wararka sheegayaan.
Dagaalka manta oo Jimce ah dhacay ayaa bilaabmay kadib markii maleeshiyaad kasoo jeeda Galmudug ay weerar ku soo qaadeen saldhig ay ciidamada Puntland ku leeyihiin xaafada Garsoor ee magaalada Gaalkacyo, sida ay dadka deegaanka sheegeen.
Ma jirto wax war ah oo kasoo baxay maamulada Puntland iyo Galmudug oo ku saabsan dagaalka manta oo Jimce ah.
Labada maamul ee Soomaaliyeed ayaa sanadkii hore ku dagaalamay magaalada Gaalkacyo, waxaana uu ka tagay ugu yaraan 40 dhimasho ah.
Gaalkacyo ayaa u qaybsanta labo qaybood, mid waxaa maamusha Puntland mida kalena Galmudug.
June 9, 2016 Al-Shabaab oo sheegtay in dagaalyanadooda ku dileen bartamaha Soomaaliya 40 askari oo Itoobiyaan ah
At least 8 killed in fighting between Puntland and Galmudug in Galkayo town